Yiziphi izimbangela ezinkulu zokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izimbangela zokufudumala kwembulunga yonke
Ikhulu lama-XNUMX kuba yikhulu lapho bobabili ukushintsha kwesimo sezulu njengoba ukufudumala kwembulunga yonke kube izinsongo ezimbili zangempela iplanethi yonke. Uma kwenzeka kuba ukushisa kakhulu komhlaba, okufanayo kubangelwa yanda izinga lokushisa eliphakathi nendawo olwandle nomkhathi ngezimbangela zemvelo futhi ikakhulukazi njengomphumela wakho isenzo somuntu.
I-Los ososayensi nochwepheshe Emkhakheni, bachitha amashumi eminyaka befunda lo mkhuba futhi bezama ukubikezela izinguquko ezikhona lokhu kufudumala kuzodala umhlaba wonke eminyakeni embalwa futhi uma sisekhona isikhathi sokumisa okunjalo imiphumela elimazayo ezisongela ukunciphisa impilo yemvelo yoMhlaba. Ngemuva kwalokho ngizophawula ngokuningiliziwe futhi ngikwenze kucace kuwe, yini i- izimbangela zokushisa komhlaba kanye nemiphumela yako engaba khona esikhathini esimaphakathi neside.
1 Izimbangela zemvelo zokushisa komhlaba
1.1 Umsebenzi welanga
1.2 Umusi wamanzi
1.3 Imijikelezo yesimo sezulu
2 Izimbangela ezenziwe ngabantu zokufudumala kwembulunga yonke
2.1 Ukwanda kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa
2.2 Ukuqedwa kwamahlathi
2.3 Umanyolo ngokweqile
2.4 Igesi leMethane
3 Iyini imiphumela yokushisa komhlaba?
Izimbangela zemvelo zokushisa komhlaba
Ngokusho kweningi labafundi bezokuguquguquka kwesimo sezulu, ezinye zezimbangela zokufudumala kwembulunga yonke komhlaba kungenzeka kungenxa yokuthi izimbangela zemvelo noma izimbangela zokuzenzela kubangelwe isenzo somuntu uqobo. Uma kwenzeka kuba izimbangela zemvelo, bekulokhu kunikela ekufudumaleni kwembulunga yonke izinkulungwane zeminyaka. Kodwa-ke, lezi zinhlobo zezimbangela azibalulekile ngokwanele ukuthi zivelise i- ushintsho lwesimo sezulu ukuthi iplanethi yonke ihlupheka namuhla nokuthi idala usongo olukhulu emhlabeni wonke.
Enye ye izimbangela zemvelo zokushisa komhlaba okubaluleke kakhulu futhi okunomthelela omubi empilweni yeplanethi uqobo, kungenxa yokwanda okukhulu kwe umsebenzi welanga ukudala imijikelezo yokushisa yesikhashana. Ilanga lethu liya ngokuya likhula futhi, ngakho-ke, liphinde futhi likhiqize imisebe yelanga ethe xaxa ngesikhathi somsebenzi walo wokuhlanganiswa kwenuzi. Siyazi ukuthi imisebe yelanga eyingozi iphambukisiwe sibonga ungqimba lwe-ozone nensimu yomhlaba kazibuthe. Kodwa-ke, zineqhaza ekushintsheni kwesimo sezulu, ngoba ingxenye yale radiation ihlala emkhathini egcinwe ngendlela yokushisa futhi yandisa amazinga okushisa aphakathi komhlaba.
Olunye uhlobo lwesizathu semvelo esidala ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke ukwanda kwe- umusi wamanzi emoyeni okwenza ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile likhuphuke ngezikhathi ezithile futhi libe neqhaza ekuzifudumiseni uqobo. Umhwamuko wamanzi yigesi ebamba ukushisa ekwazi ukugcina ukushisa ngokwemvelo. Kufaka isandla kumphumela wokushisa kwendalo futhi kungenxa yomphunga wamanzi ukuthi singaphila kula mazinga okushisa amnandi ngokwakhiwa kwempilo.
Inkinga yilapho abantu beguqula le ngxenye yomjikelezo wamanzi futhi bakhiqize umhwamuko wamanzi owengeziwe. Ungasho ukuthi lokhu kungenye yezimbangela zokufudumala kwembulunga okubukeka njengokuzenzela kanye nemvelo ngasikhathi sinye. Uma kukhulu inani lomhwamuko osemkhathini, kulapho kugcinwa khona ukushisa.
Imijikelezo yesimo sezulu
Isizathu sesithathu semvelo sokufudumala kwembulunga kungenxa yalokho okuthiwa imijikelezo yesimo sezulu okuvame ukuwela iplanethi njalo. Le mijikelezo kufanele ibe njalo emisebeni yelanga yenkosi yenkanyezi. Ngale ndlela, uma iLanga ngumthombo wamandla eshayela i- Isimo sezulu somhlaba, kunengqondo ukuthi imisebe yelanga uqobo inayo indima evelele ekushintsheni kwezinga lokushisa okwenzeka kuyo yonke iplanethi.
Izimbangela ezenziwe ngabantu zokufudumala kwembulunga yonke
Yize izimbangela zemvelo zidlala indima enkulu ekufudumaleni kwembulunga yonke, yizo izimbangela zokufakelwa kokushisa komhlaba yibo ababangela ukubhujiswa okukhulu eMhlabeni. Izimbangela eziningi ezenziwe ngabantu zingumphumela wokwanda okuthiwa amagesi abamba ukushisa kubangelwa isenzo somuntu. Lo mphumela wokubamba ukushisa ubangelwa ukuphuma kwe- isikhutha futhi kuyimbangela ebaluleke kakhulu yokufudumala kwembulunga yonke namuhla. Lolu hlobo lokukhipha seluphenduke i- ingozi yangempela nokusongela ngempilo yeplanethi futhi yingakho ochwepheshe abaningi befuna izixazululo ezisheshayo ukushaya imiphumela emibi kangaka.
Ukwanda kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa
Lokhu kukhishwa kwe-carbon dioxide kungumphumela wokusha izinto zokubasa ezimbiwa phansi. FUTHI ngukuthi iningi lokhu kushiswa kubangelwa ukukhiqizwa kukagesi futhi ngu igesi abasebenzisa izimoto nsuku zonke emigwaqeni yomhlaba. Njengoba iminyaka ihamba futhi inani labantu eMhlabeni landa, kuzokwanda ngokushiswa. izinto zokubasa ezimbiwa phansi, kuthinta kabi imvelo nokufudumala komhlaba, kufinyelela esikhathini lapho izinga lokushisa liphakeme impela okudala izinkinga ezinkulu emhlabeni wonke wabantu.
Kumele siqonde amandla asemkhathini njengento eguquguquka njalo ngenxa yokuhlushwa kwamagesi ahlukahlukene akhona emkhathini. Ngaphezu kwakho konke, nge-CO2, ibhalansi ayifani ngaso sonke isikhathi, ngoba kunezinto eziningi eziphilayo ezenza i-photosynthesis futhi ezisebenzisa le gesi ukuze ziphile.
Ezinye izimbangela ezenziwe ngabantu zokufudumala kwembulunga yilezi ukugawulwa kwamahlathi amahlathi amaningi eplanethi, abangela ukuba isikhutha sikhuphuke kuwo wonke umkhathi. Izihlahla ziguqula i-CO2 ibe yi-oxygen ngokusebenzisa inqubo ye-photosynthesis futhi ungumnikazi ukugawulwa kwamahlathi inciphisa inani lezihlahla ezitholakalayo ukuguqula i-CO2 ibe yi-oxygen. Umphumela walokhu mkhulu ngokwengeziwe Ukuhlushwa kwe-CO2 emkhathini, okuholela ekwandeni kokufudumala kwembulunga yonke ngakho-ke ukukhuphuka okukhulu kwamazinga okushisa.
Ukugawulwa kwamahlathi nakho kuletha ukwehla kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ngenxa yokuqhekeka nokucekelwa phansi kwemvelo yemvelo yezinhlobo eziningi. Isivinini sokugawulwa kwamahlathi asipheli futhi kulindeleke ukuthi ngo-2050 ngaphezu kwengxenye yehlathi lemvula lase-Amazon kube sekucekelwe phansi.
El ukusetshenziswa ngokweqile komanyolo kwezolimo kungenye yezimbangela ezibaluleke kakhulu zokwanda ngokweqile kwe izinga lokushisa elijwayelekile kweplanethi. Le manyolo aqukethe amazinga aphezulu we ama-nitrogen oxides, iyingozi kakhulu kune-carbon dioxide uqobo. Njengoba inani labantu likhula futhi landa, kune- ukwanda kwesidingo sokudla, ngakho-ke kukhona ukwanda kwezinsimu ezilinyiwe ngakho-ke, kukhulu kakhulu ukusetshenziswa komanyolo kuzo.
Ukukhiqizwa nokuphakelwa kokudla ezingeni lomhlaba kudinga isivuno esisheshayo esihumusha ekusetshenzisweni ngokungakhethi komanyolo, ukubulala ukhula, izibulala-zinambuzane, isikhunta nakho konke okuphathelene nokwandisa ukukhula nokuthuthuka kwezitshalo. Kuyadingeka ukuthi ucabange isikhathi eside futhi uqale ukusebenzisa imikhiqizo yasendaweni engadingi umanyolo omningi futhi ukukhishwa kwegesi yokushisa okushisa ngesikhathi sokuthutha kuncane.
Isizathu esisodwa sokugcina sokubukeza ukufudumala kwembulunga yonke futhi lokho okufanele kubhekwe ukuthi igesi yemethane. Lolu hlobo lwegesi lunochungechunge lwezakhiwo zomthelela wokushisa okukhulu kakhulu kune I-CO2 uqobo. IMethane nayo ikhiqizwa ngokubola kwe- imfucuza kadoti nakho konke okuphathelene nendaba yobulongwe. Izinto ezingokwemvelo ekubolile futhi lapho kungekho umoya-mpilo zakha igesi yemethane. Le gesi nayo iyanda ngokuhlushwa namandla okugcina ukushisa makhulu kakhulu.
Njengoba ubonile futhi waqinisekisa, kunjalo izimbangela eziningi ezibangela ukufudumala kwembulunga yonke kwandise futhi kubeka engcupheni umhlaba isikhathi esimaphakathi. Yize izimbangela zokufudumala komhlaba kwemvelo babe nezigameko zabo Ekufudumaleni okunjalo, yizimbangela ezenziwe ngabantu ukuxazulula ngesikhathi esifushane kakhulu.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kwaqinisekiswa ukuthi unyaka ka-2015 ubukhona ezishisayo wawo wonke umlando emhlabeni wonke. Leli qiniso elikhathazayo elihambisana nokwanda okuqhubekayo imicimbi yezulu eyeqisayo iziphepho, iziphepho noma izivunguvungu kufanele kususe ukwazi kokuningi umphakathi womhlaba ukuthola izixazululo ngokushesha okukhulu.
Babhekene nalesi simo esibucayi, ohulumeni be- amandla amakhulu omhlaba kumele athathe isinyathelo ngokushesha aqede nokuguquka kwesimo sezulu futhi ukushisa kakhulu komhlaba ukuthi iplanethi yonke ihlupheka nsuku zonke.
Iyini imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke?
Iyini imiphumela yokushisa komhlaba?
Imiphumela yokwanda kwamazinga okushisa asemhlabeni ithinta umhlaba wonke ngezinga elikhulu noma elincane. Ngokwesibonelo:
ESpain, amagagasi okushisa aya ngokwanda, ahlala isikhathi eside futhi abukhali. Ngaphandle kokuhamba isikhathi eside kakhulu, ngo-Agasti 14, 2021, idolobha laseCordovan iMontoro lashaya umlando walo omkhulu, ngo-47,2ºC, ngesikhathi sesiqephu segagasi lokushisa elathatha izinsuku ezimbalwa.
Ukukhuphuka kolwandle kuzosiphoqa ukuthi sishintshe inkambo ezindaweni eziningi. Isibonelo, amabhishi angalahleka, ingasaphathwa eyosongo eyoletha kubo bonke abahlala ogwini.
Izinhlelo zezemvelo zizoshintsha. Lokhu empeleni kuyinto ebonwayo: izitshalo ezingamelana nokushisa nesomiso zithatha indawo yalezi ezingaphansi.
Izinguzunga zeqhwa ziyancibilika, okufaka isandla ekukhuphukeni kolwandle.
Izilwane ziphela ngokushesha. Yize lapha besingakhuluma nangokuzingelwa ngokungemthetho, kunezilwane eziningi, njengamabhere asezindaweni ezibandayo okuye kube nzima ukubamba inyamazane yazo, njengoba iqhwa liyancibilika ngaphambi kwesikhathi salo.
Ukudla kungabiza kakhulu. Izitshalo zincike esimweni sezulu ukuze zikhule futhi zikhiqize izithelo zazo, ngakho-ke uma izimo ziguquka, kuzoba nzima kakhulu ukuthola imifino, okusanhlamvu kanye / noma imifino.
Njengoba ukwazi ukubona, ukufudumala kwembulunga yonke kuyinkinga enkulu kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izimbangela zokufudumala kwembulunga yonke
URolando Escudero Vidal kusho
Ukufuna i-Atmospheric Balance Reconversion and Control Project
Umbhali uRolando Escudero Vidal
Ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi sokukhuluma ngePneumoponics. Ngokuphazima kweso izinsuku zami zibaliwe. Angifuni ukuthi lapho kuwuthuli nje emoyeni, ngiyazisola ngokungakusho, ngibona isintu sihlupheka ngemiphumela yokushisa komhlaba. Impela, abanye bazothi ngithi ngiyisiwula. Wonke umuntu unelungelo lokusho lokho akucabangayo. Kepha, kungathakazelisa uma bengikhombisa ukuthi ngithi ngiyisilima. Uma kunjalo, ngokuzumayo ngithola okuthile okungenza ngisho izinto eziwubuphukuphuku. Lapho-ke ngingaze ngikubonge. Kepha, ukuthi ubufakazi bunengqondo, ukuthi bunezisekelo zangempela.
Iyini inyumoniya? I-Pneumoponics iyindlela, uhlelo oluqukethe ukondla izitshalo, okungukuthi, imifino, enomoya ngaphakathi kwempande. Kungabizwa nangokuthi ukusungulwa. Elinelungelo lobunikazi e-INDECOPI, ekupheleni kuka-2014. Luhlelo olukhombisa ngokusobala ukuthi imifino yondliwa kuphela yimpande nokuthi amaqabunga asebenzela kuphela ukuxosha amagesi akhiqizwa ngaphakathi kwesitshalo, njengomphumela wezinqubo zamakhemikhali ezenzeka ngaphakathi kuzo. Futhi elinye lalawo gesi, futhi eliningi kakhulu, yi-oxygen. Le ndlela, esetshenziswe ngamanani amakhulu, ingaxazulula ukushisa komhlaba kalula. Futhi, hhayi nje ukuxazulula inkinga, kepha futhi kungasiza umuntu ukulawula umkhathi, ukuthuthukisa ezolimo, njll. Njengoba imifino isebenzisa izinhlobo eziningi zegesi njengokudla. Mhlawumbe zonke izinhlobo zegesi ezisemkhathini.
Ngabe lokhu kusungulwa kususelwa kuphi? Lokhu kusungulwa kususelwa ku-The Radicular Theory, eshiwo yincwadi enesihloko esithi Project of Reconversion and Control of the Atmospheric Equilibrium, ebhalwe nguRolando Escudero Vidal. Lo mbono usekelwe emaqinisweni amaningi nasezintweni ezingabonakala emvelweni. Lo mbono uthi imifino yondliwa kuphela yimpande. Ukuthi amaqabunga asebenzela kuphela ukuxosha amagesi akhiqizwa izinqubo zamakhemikhali ezenzeka ngaphakathi.
Kepha inhloso eyisisekelo yale phrojekthi ukuxazulula izinkinga ezisemkhathini ezithinta ubuntu. Ngalesi sizathu, ezinsukwini zokuqala zikaMashi, yaziswa uMbuso wasePeruvia, iletha ivolumu yesifinyezo seLa Neumoponia eNdlu kaHulumeni, egameni likaMongameli weRiphabhulikhi. Umthamo egameni likaNgqongqoshe wale minyango elandelayo: UMnyango Wezemvelo, uMnyango Wezolimo, uMnyango Wezomnotho, uMnyango Wezangaphandle, njll. Futhi nakwiCongress of the Republic, egameni likaMongameli weCongress, uNkk Ana María Solórzano, okuthi, ngokweLa Primera, abe nomusa ngokwanele ukuba aphawule ngalokhu. IVolumu nayo yathunyelwa e-Agrarian University.
Phendula uRolando Escudero Vidal
Futhi iyini imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke? Kuningi futhi kubi kakhulu. Kumele kucatshangwe ukuthi i-carbon dioxide eningi iqoqa emkhathini. Le gesi inekhabhoni. Ikhabhoni iqoqa ukushisa bese ikudlulisela ezindaweni ezizungezile, futhi esimweni somkhathi ngumhlaba. Lapho into ifudunyezwa iyanweba futhi lapho inweba iba buthakathaka. Kulokhu, uqweqwe lomhlaba luyafudumala. Ngakho-ke kuyanda. Futhi uma iyanda, iyancipha.
Umphumela wale nqubo ukuqhekeka okuvela ezindaweni eziningi. Enye yalezi zindawo uCallejón de Conchucos wami othandekayo. I-Phenomenon ethinta idolobha lasePiscobamba, iSocosbamba njll. Futhi okuwukuphela kwesixazululo, ngeshwa, ukushiya indawo. Ayikho enye. Yebo, kungenzeka, lezi zindawo zinonyaka owodwa kuphela wokuhlala.
UFrancisco Garcia kusho
Ngiyavuma, lesi kungaba yisinyathelo esilandelayo se-hydroponics ne-aeroponics, okwamanje esiphumelele kakhulu njengezindlela zokukhiqiza ezolimo. Ngokwami, ngikholelwa ukuthi abantu sebevele bawubonile umonakalo okumele "ulungiswe" ngokufuna ezinye izindlela, ngaphandle kokukhohlwa ukuthi izitshalo ziyisiqalo sokukhiqizwa kwamandla ku-biosphere.
ngiyabonga futhi sizokubona maduzane
Phendula uFrancisco Garcia
UJose Maria kusho
Kunezimbangela eziningi zokufudumala kwembulunga yonke, izinkinga eziningi ngenxa yokushisa komhlaba, abantu abaningi bangafa, izigxobo ziyancibilika, kungaba nezikhukhula eziningi, ngenxa yalokho abantu abacabangi ukuthi yini engenzeka.
Phendula uJosé María
U-Enrique jr kusho
Abantu akusikho ukuthi abacabangi kepha ukuthi abakubeki njengokubaluleke kakhulu kulokho okungenzeka lapho kunebhadi uNkulunkulu alinqabayo futhi bazobona nje ukuthi yini okungalethi ukubaluleka kweplanethi
Phendula ku-enrique jr
haha iqiniso lelo.
I-nitrogen ne-oxygen esemoyeni ethintana nezindawo ezishisa kakhulu (FOR EXAMPLE AIRCRAFT ENGINES), ziguqulwa zibe yi-nitrous oxide, ephendula ku-stratosphere ne-ozone, ngaphansi kwesenzo semisebe yobude obungaphansi kuka-0,31 ama-micrometer, okuholela ekuncipheni kongqimba lwe-ozone.
Kungani izigidi zezindiza zaminyaka yonke zingakhulunywa neze? UMr money ungumnumzane onamandla!.
abantu bayiziphukuphuku kakhulu ukuthi noma kunini lapho kube nezikhukhula ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke bengingathi ngiyazisola
Okuqinisekile ukuthi kuyinkinga ukuthi kungekudala noma izogcina isithinte (ngaphezulu) sonke. Ngaphandle kokuthi kuthathwe izinyathelo ezisebenza ngempela ukukugwema, kunjalo.
U-Agustin Chavez kusho
Indaba yokufudumala kwembulunga yonke, iningi lethu likhathazekile njengoba kunemiphumela elandelayo ethinta umkhathi, kodwa-ke asenzi lutho, kubalulekile ukuthi umphakathi, izinhlangano zikahulumeni nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni, osomabhizinisi, izikhungo zemfundo kanye nawo wonke umuntu ofisa ukumisa noma ukunciphisa lezi zinkinga esibhekene nazo, ake siqale imikhankaso eqwashisa ngokunakekelwa nokuvikelwa kwemvelo futhi ngaleyo ndlela sigweme imishayabhuqe eminingi, izifo nokuba khona kokuguqulwa kwesikhutha.
Phendula u-Agustín Chávez
Ngincoma i-documentary COWSPIRACY ukuvula ingxoxo ethokozisayo ngalesi sihloko, ngoba ngokwedokhumentari, imbangela enkulu yokufudumala kwembulunga yonke isibopho semfuyo ngqo, okuhlobene nokuncane kunendlela yethu yokudla. Futhi isizathu silula: ukudla inyama kudinga ukusetshenziswa okukhulu kwezinsizakusebenza futhi uma ubheka noma iyiphi imenyu yokudlela, ukunikezwa kwenyama cishe kukonke. Lokhu kuyinto esingayazi ngokuphelele, futhi ukwenza noma yiliphi iqhaza, iningi LABANTU kuzodingeka benze ushintsho emikhubeni yabo yokusebenzisa ngento ebucayi njengokudla, enye yezinhlobo ezinkulu zenjabulo. Ukuhlaziya isihloko, ngaphandle kokubonisa okungathi sína kwedokhumenti engikushoyo, kunengqondo ngaphandle kokucabanga okuningi ngakho. Yisihloko esibucayi futhi esingathintwa, ngoba ngokusobala izinhloko zomkhakha wemfuyo zinethonya elikhulu kwezombusazwe emhlabeni wonke.Yincwadi enzima, engakhululeki, futhi singathanda ukuthi ingabi nasisekelo, kodwa ngamafuphi nje, uyadalula. ukuthi udaba lokufudumala kwembulunga yonke luhlobene ngqo nesidingo soshintsho endaweni ngayinye yezakhamizi zomhlaba, ngokushintsha kwesimo sengqondo hhayi kuphela kulwanga kodwa nangokuthuthukiswa kozwelo olukhulu kukho konke esikuzwayo ezizungezile. Ngiyethemba uyayithanda futhi siyethemba ukuthi sizokwazi ukukuqonda lokhu ngesikhathi. Asikwazi ukuqhubeka nokuhlekisa nge-veganism ngoba nje abanye bayizidlamlilo futhi bayacasula, kufanele sibheke izinketho zemvelo njengendlela yokuphila enenhlonipho ezweni elisinikeze konke. Sekuyisikhathi sokubuyisela okuthile. Ozithobayo.
Kumele kubhekwe nokuthi esinye sezimbangela ezinkulu zokuqothulwa kwamahlathi, ngaphezu kwemfuyo, izivande ukuxhasa izinkulungwane zabantu. Futhi kufanele futhi ucabangele umanyolo.
Singabantu kuqala okufanele sisolwe ngokungcolisa imvelo ngoba lokho kuyashisa kakhulu, umkhathi uyonakaliswa futhi yithi esiwubhubhisayo lapho sikhombisa amahlathi, sigawula izihlahla, intuthu eningi iyasithinta njll.
Zonke izinqubo zekhefu lemvelo zihlala, okumele ukwenze ukunikeza inkomba efanele kulawo masalela.
Ukuthola amacala akuxazululi inkinga, kepha kunalokho, ukusebenzisa indlela efanele.
UJorge Ventura kusho
Bathi asazi ukuthi sinakho kuze kube yilapho sikubona kulahlekile, ngakho-ke kuzokwenzeka lapho ukungcola kudlula iplanethi, ubuchwepheshe obuningi buzosetshenziswa uma sizidela ngeplanethi yethu engenakudlula yonke imali nobuchwepheshe UNKULUNKULU asishiye ngakho iplanethi enempilo efana nomzimba wethu uma singayinakekeli imizimba yethu futhi nathi ngokwethu sidala izifo ezingenakulungiseka ngendlela yethu yokudla kufanele sibe nokuhlakanipha okwengeziwe mayelana nendlela esiziphatha ngayo empilweni sesivele sazi ukuthi akudingeki ukuthi singcolise akufanele singcolise imifula yethu nezilwandle futhi kanjalo sikwenzela ukufisa imali kepha wonke umuntu uyazi ukuthi uziphatha kanjani futhi kufanele senze ingxenye yethu kuphela yokwenza okufanele
Phendula ku-jorge ventura
Noma iyiphi inkinga ingaxazululwa.
xazulula, kepha ungaphindisi
isenzo ngu-rl Atisal kusho
Umhlaba uguqulwa ngokunganaki okukhulu nokungabi nalwazi ekubhekeni izikhathi, ukungabi bikho kwamandla okuvimbela ukuwohloka kwesibhakabhaka, kufanele ubheke ngenhla ukubona ukusabela ngezansi, konke okulalelayo, ukubheka phezulu naphezulu naphezulu ukubona okuningi nokuningi nangaphezulu ngezansi
Phendula ku-actisal kusuka ku-rl Atisal
Ibola kanjani i-CO2
Kuyacaca ukuthi i-CO2 iyawohloka lapho kufudunyezwa amalahle. Izinkomba ezicacile zaleli qiniso yimicimbi emibili eyenzeka emvelweni: lapho kufika intwasahlobo izimvula ezincane ziyawa. Uma kufika ihlobo lidlule, izimvula ziyanda, ziba izimvula ezinkulu. Kungani lokhu? Okwenzekayo ukuthi entwasahlobo imisebe yelanga isesimweni lapho ingakwazi ukushisa kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ehlobo le misebe ifika iqonde emkhathini futhi ishisa kakhulu. Lokhu kungubufakazi bokuthi i-CO2 iyawohloka ekushiseni, kukhulula umoya-mpilo. Bese umoya-mpilo ujoyina i-hydrogen, egcwele emoyeni, yakha amanzi, i-H2O. Futhi-ke lina.
IHuaycoloro yindawo etholakala esifundazweni saseHuarochirí. Uma igama lalo livela emagameni amabili amaKech-huas: huay-ghó nelloj-ro, yindawo engaba yingozi. IHuay-ghó uhlobo lwenyoka encane kakhulu, ezacile, engamasentimitha angama-30 ubude nangaphezulu noma ngaphansi kwamamilimitha amane ukujiya. Ukuhamba kwayo kwehla emhlabathini. Ihlala ngaphansi komhlaba. Ingahlukaniswa kabili futhi zombili izinhlangothi zisaphila. Ngamunye uhamba ngendlela yakhe futhi ungena ngaphansi komhlaba lapho ahlala khona.
I-Huayco ivela egameni lale nyoka, ngakho-ke, izakhiwo zayo zifana kakhulu nalezo zezinyoka ezincane. Ngoba izakhamuzi zasendulo zalezi zindawo zaziqamba indawo ngokwalokho ababekubona. Futhi ama-huaycos ahamba ngendlela engavimbi, njengezinyoka ezincane, futhi uma ehlukana aqhubeka nokusakazeka.
Futhi okushoyo ukuthi "upholi" kususelwa egameni elithi "loj-ro" okuyigama leKech-hua lokudla okufana nesobho, kepha obukhulu, ingxube yezinto eziningi: imifino, amazambane, ubhontshisi, inyama, njll. . I-huayco uma ifika endaweni lapho ingamiswa khona iqoqa yakha into efana nalokhu kudla okungenhla. Kusukela lapho kwazalwa igama elithi Huaycoloro.
ujuir jhair kusho
Uma imisebe ye-ultra violet idlula sizoshisa size sife
Phendula ku-juan jhair
UGino Gallo kusho
Yeka ukuthi kudabukisa kanjani ngemuva kweminyaka embalwa sizofa sishisiwe, uma singenzi lutho kufanele sazise abantu ukuthi bayeke ukusebenzisa amafektri. Yenza umzamo wokusiza imvelo. Ngiyacela bangani, ake sizame ukukuyeka lokhu kungakephuzi. Phinda uvuselele izihlahla zokutshala futhi sinweba impilo isidalwa esingumuntu Sicela usize 🙁
Phendula u-Gino Gallo
kufanele ukugweme lokhu
Izimbangela zokufudumala kwembulunga yonke zingaba ziningi. Kepha kunendlela engaxazulula inkinga; Iphrojekthi Yokuphindwaphindwa Nokulawulwa Kokuqukethwe Komkhathi noma I-Pneumoponics.
imininingwane emihle kakhulu
donais sebastian herrera medina kusho
Impilo eplanethi yinhle kakhulu uma siyilimaza lingakafiki ikusasa lezingane zabo, yini izwe abazolishiyela ithuba, ayikwazi ukuba yi-hey, sonke ukuhlangana nabavukeli, yonke into, singabantu, hhayi izilwane, masinakekele umhlaba, hei ngisho nezilwane ziyazinakekela
Phendula ku-donais sebastian herrera medina
ULucia Paredes kusho
ukuthi abantu bayeke ukuqamba amanga balalele isayensi.
Phendula uLucía Paredes
UMoisés Ugido Cedeño kusho
Imbangela enkulu yokufudumala kwembulunga yonke imfuyo, amagesi e-methane avela ezinkomeni, nokuqina kwawo kanye nokuqothuka, angcolisa kakhulu kunayo yonke i-CO2 ekhiqizwa yibo bonke abantu, ukuqothulwa kwamahlathi okukhulu okudingekayo emadlelweni adinga isikhala nezinsizakusebenza eziningi, ukuze khiqiza okuncane kakhulu ...
Ngabe ufuna ukusiza ukuvimbela ukufudumala kwembulunga yonke? Ungayidli inyama.
Ngincoma futhi nokubuka i-documentary cowparacy ukuthi ichazwe kahle kakhulu
Phendula uMoisés Ugido Cedeño
U-Alberto Compagnucci kusho
Ngaphezu kokubeka amazwana, ngifuna ukwenza umbuzo. Ngaphandle kwezimbangela ezibalwe njengokufudumala kwembulunga yonke, kungenzeka yini ukuthi singena kumjikelezo wesimo sezulu esingenazo izinkomba zomlando wawo? Ngikhuluma ngokuhamba komhlaba, okunomjikelezo othatha cishe iminyaka engama-25.000 futhi-ke, ngenxa yobude bawo, asinayo inkomba kanye nesimo sezulu esincane. Ngokwalokho engikuzwile, cishe sesineminyaka eyi-12.000 singena eminyakeni yeqhwa futhi kwaqondana nje, icishe iqondane nesikhathi somjikelezo wesigamu sesethulo. Kungenzeka yini ukuthi siphokophele esikhathini esingenazo izinkomba ezithile kuso? Ngokufana, kuyahambisana ukucabanga ukuthi, ngokwazi ukuthi umzila woMhlaba ozungeza ilanga empeleni uyisiyingi, isethulo senza ushintsho ebangeni eliphakathi kwendawo okugxilwe kuyo leyo ellipse ngakho-ke ukuguqulwa kwalo nokuthi liyabonakala, nakuba kepha hhayi ngokwengxenye, kuzinguquko zezulu ezibonwayo?
Phendula u-Alberto Compagnucci
diego saavedra gonzalez kusho
Hhayi-ke, lokhu kungisizile kakhulu, ngiyabonga, kepha kukhona ucwaningo oluthi ukufudumala kwembulunga yonke kuyinganekwane nokuthi lokhu sekwenzeke amahlandla ama-3, ngakho-ke engikufunayo ukuthi ngabe lokhu kuyiqiniso?
Phendula ku-diego saavedra gonzalez
Ngingalusebenzisa kanjani lolu lwazi emsebenzini wami noma kumqondo wami uma kungekho mbhali noma okungenani inyuvesi eyodwa evumela ulwazi olwabiwe, lokhu kungithukuthelisa emakhasini ewebhu, zikuphi izinkomba noma izingosi zabantu abenza ucwaningo noma umsebenzi wensimu, ukukopela okuphelele.
Ngicabanga ukuthi kufanele sisindise umhlaba ngokumisa konke lokhu
U-Alex Gonzales Herrera kusho
Akulungile, bengizokubeka ohlwini ngoba lukhulu, kuphela ngezizathu ezimbi kakhulu, ungalokothi ungene kule sayithi, aluzange lungisebenzele nakancane
Phendula u-Alex Gonzales Herrera
UCamila Osa kusho
Kubonakala kimi ukuthi ngaphandle kokusho embhalweni ukuthi enye yezimbangela ezinkulu imboni yemfuyo edala inani elikhulu kakhulu lamagesi abamba ukushisa, ngaphezu kokushisa kwamafutha ezimbiwa phansi. Amagesi akhishwa yizilwane ezifuywayo yiwo abangela amagesi abamba ukushisa futhi uma sikuhlanganisa nokugawulwa kwamahlathi ukuze kukhule ukudla kokukhuluphala kwemfuyo, imiphumela yokufudumala komhlaba iyanda.
Phendula uCamila Osa